ODUU Hatattama Sudan Ethiopia Barbadesuf Qophefte loli TPLf fi motumma akka dhabatu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooODUU Hatattama Sudan Ethiopia Barbadesuf Qophefte loli TPLf fi motumma akka dhabatu
ODUU Hatattama Sudan Ethiopia Barbadesuf Qophefte loli TPLf fi motumma akka dhabatu
ODUU Hatattama Sudan Ethiopia Barbadesuf Qophefte loli TPLf fi motumma akka dhabatu | Moha Oromo
Keelloo: Fulbaana 10,2021
Dhaabbileen siivilii Itoophiyaa keessa jiran 24 bara haaraa sababeeffachuun waraanni biyyattii goolaa jiru akka dhaabbatuu fi namuu daandii nageenyaatti akka deebi’u gaafatan.
Dhaabbileen siivilii biyya keessaa dhimma waraana Itoophiyaa keessatti jiruu irratti wayita yaada akkasii dhiyeessan kun kan jalqabaati.
”Rakkoon bu’uuraa waraana kanaaf sababa ta’e hokkaraa fi dhukaasaan hin furamu,” jedha waamichi dhaabbileen 24 waliin dhiyeessan kun.
Waamichi dhaabbilee kunneenii kan hawaasi idil-addunyaa ji’oota darban dhiyeessaa tureen walfakkaata.
“Dhaabbileen siivilii biyya keenya keessa jiran hundinuu akkaataa waraanni kun dhaabbachuu danda’uu fi nageenyi fi araarri mirkanaa’uu danda’urratti tokkummaan hojjechuu qabu,” jedha waamichi waloo kun.
Waraanni kun amma hin dhababatu taanaan ”biyyattii gara diigamuutti geessa” jechuun yaaddoo qaban ibsan dhaabbilee siivilii kunneen.
”Waraanni kun yeroo ammaa kutaalee biyyattii hedduutti babal’ataa jira. Dhibdeen jiru karaa nagaa hin furamu taanaan biyyattiin gara diigamuutti deemuu malti.”
Itoophiyaa keessatti naannooleen Tigraay, Amaaraa, Oromiyaa, Somaalee, Affaar, Beenishaangul-Gumuz fi naannoon Uummattoota Kibbaa hundinuu rakkoo waraanaa fi walitti bu’iinsaan raafamaa jiraachuu eeran dhaabbileen siivilii kunneen.
Sababa hookkara hammaateen lammiileen hidhannoo hin qabne hedduun gaaga’ama lubbuu fi buqqa’uuf saaxilamaa jiraachuun akka isaan yaaddessee fi dhimma taa’anii ilaalan akka hin taanes eeran.
Daafoo waraanaa kanaan kutaalee hawaasaa kanneen humna hin qabne akka daa’immanii, dubartoota fi jaarrolee miidhaa saal-quunnamtiin walqabatuu fi dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamaa jiraachuu ibsan.
Misoomaawwan bu’uuraa bakkaa bakkatti burkutaa’aa jiraachuutti akkaan yaadda’uu kan ibsan dhaabbileen kunneen kanarraa ka’uun diinagdeen biyyattii kufaatiif saaxilamaa jiraachuus eeran.
”Duudhaan keenyaan mari’annee araara buusuu hin dandeenye. Hookkarri kun duudhaa hawaasummaa keenyaa balleesseera. Hariiroo nuti qabnuu fi waan akka uummataatti waliin qabnu akka diigamu gochaa jira,” jechuun yaaddoo akka biyyatti qaban ibsan.
Dhaabbileen 24’n kunneen walta’uun waamicha dhiyeessan keessatti waldhibdee sadarkaa furuuf rakkisurra ga’e kanaaf furmaata kaa’uuf, duudhaa araaraa karaa jaarsolii biyyaan gaggeeffamu kan durirraa kaasee biyyattii keessa jiruuf carraan kennamuu qaba jedhan.
Qaamoleen siyaasa keessatti hirmaatan hundinuu duudhaa kanatti deebi’uu qabus jedhan.
Waraanni Itoophiyaa keesatti deema jiru karoora dhukaasa dhaabuu/dhukaasa meeshaa waraanaarraa bilisa ta’uu Komishiniin Gamtaa Afriikaa kaa’ate kan faallessu ta’uusaatiin qaamoleen waraana keessa jiran hunduu akka irraa of qusatan dhaaman.
Kanneen walitti dhukaasaa jiran dhukaasa dhaabuun marii nageenyaa akka gaggeessan, holola waraanaa akka dhaaban, nageenyaa fi tokkummaa uummata bal’aaf dursa akka kennanii fi birmadummaa biyyaa akka eegan gaafataniiru.
Waraanni dhaabbatee mariin nageenyaa akka gaggeeffamuuf waan irraa eegamu akka raawwatanis waliif mallatteessuun waadaa galaniiru dhaabbileen siivilii 24’n kunneen
ODUU AMMEE Oduuwwan jajjaboo Oolmaa Oromiyaa fi Ethiopia Oduu Guyyaa Har'aa
ONN: Oduu Fulbaana 6,2021 OMN Horn: Oduu (FULBAANA 6, 2021) ODUU AMMEE Oduuwwan jajjaboo Oolmaa…
ODUU Hatattama Namonii 120 Nafxanya irra ajefamu fi gocha Tplf fi Nafxanya kuni
Oduu Fulbaana 8,2021|| Sababa Reeffa Laga Takkazeetti wal dhabdeen Itoophiyaa fi Sudan hamachuu ODUU Hatattama…
Ammee: WBO’n magaalaa Shaambuu tohannaa isaa jala galchuuf dhukaasa bane
Military and Foreign Affairs Network: Battlefield Ethiopia (updated)